Man City oo goor dhow dib u helaysa saddex laacib oo muhiim u ah – Gool FM
(Manchester) 19 Agoosto 2016. Tababare Pep Guardiola ayaa filanaya inuu goor dhow dib u helo kabtanka kooxdiisa Man City Vincent Kompany iyo waliba saxiixyadiisa cusub ee Ilkay Gundogan iyo Leroy Sane.
Guardiola ayaanan dooneyn inuu garoonka kula soo deg dego Kompany oo muddooyinkanba la il darnaa dhaawacyo isdaba joog ah.
“Waxaan u baahannahay hal ama labo tijaabo oo kale oo dhanka muruqa si aan u aragno sida uu yahay, laakiin kol horeba qeyb ayuu ka ahaa tababarka ma ahan si buuxda laakiin wuu ku lug lahaa,” Guardiola ayaa sidaa ka sheegay shirka jaraa’id ee ka horreeya kulanka sabtida ay u safrayaan Stoke City.
“Waxaan u maleynayaa inuu ku jiro qeybihiisa ugu dambeeya ee soo kabsashada, waxaan sugayaa dhaqtarka inuu yiraahdo waa diyaar. Wax badan ayuu na caawin doonaa xilli ciyaareedkan, waan garanayaa inta ay fiicnaanshihiisu tahay.”.
Pep oo ka hadlaya dhaawacyada saxiixyadiisa cusub ee Gundogan iyo Leroy Sane ayaa misana yiri: “Leroy wuxuu sameeyay qeybtiisii ugu horreeysay ee tababarka, wuxuu weli qabaa dhibaato yar oo muruqa ah laakiin hal ama labo usbuuc marka aan ka soo laabano fasaxa kulamada caalamiga, diyaar ayuu noqon doonaa.
“Gundogan tababarka ayuu kooxda kula soo laabtay maanta sida Leroy. Waa aqbaar fiican, waa ciyaaryahan fiican.”.
Pep Guardiola oo albaabka u furay Joe Hart: Waa uu bixi karaa haddii uu doono"